सफल उद्यमी बन्न स्वस्थ हुनुपर्छ  HamroKatha
सफल उद्यमी बन्न स्वस्थ हुनुपर्छ
विश्व प्रख्यात उद्यमीहरुले आफ्नो स्वास्थको ख्याल कसरी राख्दा रहेछन् त ?
हाम्रो कथा २०७६ साउन १७ गते १७:४७
तस्बिर श्रोत : FacesofFounders
हरेक मानिषको ३ वटा प्राथमिकता हुन्छन् – स्वास्थ्य, भावनात्मक सम्बन्ध र करियर । त्यस मध्ये पनि स्वास्थ्य सबैको पहिलो प्राथमिकता हो । यसै हिसाबमा उद्यमीले पनि आफ्नो जीवनशैली बनाई राख्नु पर्छ I सफलताका लागि स्वस्थ रहनु अनिवार्य हो I
ट्विटरका सह संस्थापक विज स्टोन विगत १० वर्षदेखि शाकाहारी भएर बसेका छन् । कुल २ सय मिलियन अमेरिकि डलरका मालिक स्टोन आफ्नो स्वास्थ्प्रति ख्याल गर्दै मासु त्याग्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनले वियोण्ड मिट भन्ने कम्पनिमा समेत लगानी गरेका छन् । जसले सोयाविनको मासु उत्पादन गर्दै आएको छ । यहि सोयाविनको मासु खाएर नै उनी आफ्नो शरिरलाई चाहिने सम्पुर्ण प्रोटिन र न्युट्रिसन पुर्याउँदै आएका छन् ।
अर्की उद्यमी हुन् एलिजावेथ होम्ज । उनी अमेरिकि उद्यमी हुन् । थेरानोस नामक एक रगत जाँच गर्ने कम्पनिकी सञ्चालक होम्ज आफुलाई स्वस्थ राख्न हरेक दिन कयौं पटक काँक्रो र सागको झोल खाने गर्छिन् । दुनियाँको प्रभावशालि १०० व्यक्तिमा पर्न सफल होम्जको थेरानोसको बजार मूल्य करिव ९ विलियन अमेरिकि डलर बराबरको छ ।
मुटुको शल्यक्रिया गरेपछि वाल्ट डिज्नेका निवर्तमान सिइओ माइकल इजनर पनि शाकाहारीमा परिवर्तित भए । नत्र यसअघि उनी मासुको परिकार भनेपछि हुरुक्कै हुने मानिस हुन् । चिल्लो र वोसो रहित शाकाहारी भोजन गर्ने इजनर स्वास्थ्यप्रति निकै सजग भएका छन् ।
अर्का हुन् डेविड मर्डक । उनी जति स्वास्थ्यप्रति सजग को होला र ? उनी डोल फुड का सिइओ हुन् । उनी अहिले ९४ वर्षका भए । उनको कुल सम्पत्ति ३ विलियन अमेरिकि डलर भन्दा बढि छ । आफू १२५ वर्ष बाँच्ने उनको दाबी छ । कारण उहि स्वास्थ्यप्रति उनको संवेदनशिलता । उनी हरेक दिन एक्सरसाइज गर्छन् । यति मात्र होइन, उनी घोड चढि र योगामा पनि उत्तिकै समय विताउँछन् ।
सर्जे ब्रिन । गुगलका सहसंस्थापक । उनी पनि स्वास्थ्यप्रति अति नै सचेत व्यक्ति हुन् । स्वस्थ रहनका लागी हक्कि, जिम्नास्टिक र स्काइडाइभिङका उनी सौखिन भएका छन् । खानामा पनि हेल्दी डाइट मात्र लिन्छन् । त्यो पनि हरेक दिनको एक्सरसाइजसँग ।
साँढे सात विलियन अमेरिकि डलरका मालिक स्टान क्रोन्कि, क्रोन्कि स्पोर्टस् एण्ड इन्टरटेन्मेण्टमा मालिक हुन् । उनी पनि निकै सचेत व्यक्ति हुन् । उनी विहान ६ बजे उठिसकेर ब्रेकफास्ट पुर्व नै धेरै काम गरिसक्छन् । उनी सिमित मात्रामा पाउरोटि, पास्ता, राँगाको मासु तथा माछा र अण्डा नियमित सेवन गर्छन् ।